Sampana SVK – FPMA Toulouse
Isantaona SVK 2022
Tamin’ny taona 1997 no niforona ny SVK Toulouse. Sehatra iray itomboana sy ivelaran’ny vehivavy amin’ny fanompoana an’Andriamanitra ka ampiasany ny fanomezam-pahasoavana manokana nomen’Andriamanitra azy amin’ny maha vehivavy.
Sampana mitaiza ny mpikambana mba hianatra sy haka lesona amin’ny fandalinana ny Soratra Masina, afahana mampihatra izany amin’ny adidy rehetra napetraky ny Tompo ho sahanina eo anivon’ny ankohonana, fiangonana, fiaraha-monina. Ny teny hanorenany ny asany arak’izany dia ny hoe :
» Aoka isika samy hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » Hebreo 10:24
Ireo birao SVK 2020 -2021
Filoha : ANDRIANJATOVO Lalao. andrianlalao@yahoo.fr
Filoha mpanampy : RANDRIAMANGAMALALA Malalatiana
Mpitambola : RAKOTOMALALA Voahangy
Mpitantsoratry ny vola : RALISATA Vanessa
Mpitantsoratra : RANIVOLALASOA Claudia
Mpitantsoratra mpanampy: RANIVOLALASOA Rondro
Ireo asa atao :
Fitaizana ara-panahy amin’ny alalan’ny fiofanana sy fampianaram-pinoana.
Fanaovana asa soa sy fiantrana eo anivon’ny fiangonana
Filokokoloana sy fanaingoana ny trano fiangonana : fanolorana voninkazo
Fitaizana ny vehivavy ara-koltoraly : fianarana hira sy tantara an-tsehatra maneho ny maha vehivavy kristiana malagasy
Fitaizana amin’ny fikolokoloana vatana sy tokantrano : fianarana taozavatra sy hairaha isan-karazany : zaridaina, sakafo, zaitra, sns
Fanohanana ara-bola ny asan’ny fiangonana ka miezaka manao hetsika lehibe iray isan-taona.
Fanatanterahana Bazar de Noël izay hanaovan’ny SVK vokatra amin’ny traikefa sy fahaizany manao sakafo ka ivarotany izany ho an’ny mpiangonaTamin’ity taona 2020 ity dia Rindran-kira ara-pilazantsara niarahana tamin’i Zo-Hely, Nanie ary Lôla no nokarakarain’ny SVK ny Asabotsy 7 Martsa ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy.